के गुगल वास्तवमै वेबलाई उत्तम बनाउन कोशिस गर्दै छ? | Martech Zone
के गुगल वास्तवमै वेबलाई उत्तम बनाउन कोशिस गर्दै छ?
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शुक्रबार, जुन 19, 2015 Douglas Karr
केही समय पहिले, गुगलले साइट अधिकारको हिस्साको रूपमा डोमेन रेजिष्ट्रेसनको विश्लेषणमा पेटेन्ट राख्यो। परिणाम यो थियो कि सम्पूर्ण ब्ल्गोसियर र एसईओ उद्योगहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको डोमेनहरू अधिकतम समयका लागि दर्ता गर्न सल्लाह दिए। I यसको बारेमा पनि लेखिएको थियो भर्खरै .. र राम्रो मित्र पीजे हिन्टनबाट खण्डन गरियो कम्पेन्डियम ब्लगवेयर (टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्)।
अब गुगल यसको दृष्टिकोणमा अलि बढी अगाडि बढिरहेको छ - को साथ मत्ती Cutts ड्रपिंग इशाराहरू जुन गुगलले सक्छ पृष्ठ लोड समय को उपयोग रैंकिंग साइटहरूमा एक कारकको रूपमा। जब यो सबै न्यानो र अस्पष्ट देखिन्छ, यसले इमान्दारीपूर्वक मलाई चिन्ता गर्दछ। के यसको मतलब यो हो कि केवल गहिरो जेबसँगको साइटहरूले गुगलको अनुक्रमणिकामा राम्रो दर्जा दिन सक्षम हुनेछ?
के यो हस्तक्षेप गर्ने गुगलको तरिका हो? नेट तटस्थताको? वा यो केवल पैसा बचत गर्न को लागी कोशिश गरीरहेको छ? गुगल जस्ता कम्पनीमा बचतको कल्पना गर्नुहोस् जब उनीहरूका क्रलरहरू यसले लिने समयको एक अंशमा साइटहरू क्रल गर्न सक्षम छन् ... संख्याहरू विशाल छन्।
यस मुद्दाको अंश, मेरो विचारमा, यो हो कि गुगलले आफ्नो क्रलिंग विधिहरूमा अझ परिष्कृत हुनु आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाइरहेको छ। वेब धेरै अधिक जटिल हुँदै गइरहेको छ, गतिशील रूपमा उत्पन्न सामग्री, जाभास्क्रिप्ट र एजेक्स प्रविधिहरूको प्रयोग, सिन्डिकेशन, फ्ल्यास र सिल्वरलाइट, र मल्टि-मिडियाको साथ। यदि गुगल एक व्यावहारिक खोज इञ्जिन रहन चाहान्छ भने, उनीहरूको क्रल र अनुक्रमणिका विधि विकसित हुनुपर्छ। त्यो विकासको लागि अझ धेरै प्रशोधन, मेमोरी र ब्यान्डविथ आवश्यक छ। त्यो पैसा खर्च।
त्यसोभए, विश्वको एक धनी कम्पनीको रूपमा, गुगलले स drop्केत ड्रप गर्न थालेको छ ... कडा। तपाईंको साइटहरू छिटो बनाउनुहोस् र हामी तपाईंलाई राम्रो क्रममा दिनेछौं। यो पूर्वाधार, क्षमता र श्रोतहरूको साथ कम्पनीहरूका लागि उत्कृष्ट छ ... तर सानो केटालाई के हुन्छ? GoDaddy मा होस्ट गरिएको एउटा सानो निजी ब्लगले कसरी प्लेटफर्ममा होस्ट गरेको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ जुन लोडशर्निंग, क्याचिंग, वेब प्रवेग वा क्लाउड टेक्नोलोजीसँग हजारौं डलर खर्च गर्छ?
मेरो नम्र रायमा, मलाई लाग्छ यो लीन छ खराब छेउ यसलाई तोडौं:
वेब अधिक जटिल हुँदै गइरहेको छ।
यसको गुगललाई यसको प्रविधिहरू अगाडि बढाउन आवश्यक पर्दछ।
यसको लागि Google ले अधिक पैसा खर्च गर्दछ।
वैकल्पिकले साइटहरूलाई दण्ड दिईदैछ जसले बिस्तारै प्रदर्शन गर्दछ, तिनीहरूलाई अधिक खर्च गर्न र उनीहरूको साइटहरूको गति बढाउन, Google को लागतहरूलाई कम गर्न।
यसले राम्रो PR बनाउँदैन, यद्यपि।
यसको सट्टामा, गुगलले यसलाई सहयोगी बनाउँदछ वेब अनुभव बृद्धि गर्दै.
यो तपाईं र मेरो बारेमा होइन। यो गुगलको तल्लो रेखा को बारे मा छ।
त्यो भने, साइट गति is महत्त्वपूर्ण र म मानिसहरूलाई तिनीहरूको साइटको प्रदर्शन सुधार गर्न सल्लाह दिन्छु बाउन्स दरहरू कम गर्न र रूपान्तरणहरू वृद्धि गर्न। त्यो निर्णय मूल्यांकन गर्न र लगानीमा फिर्ताको निर्धारण गर्न तपाईंको व्यवसायमा छोडियो।
जब गुगलले यो गर्न थाल्छ, यो अब ब्यावसायिक निर्णय होईन - यो एक व्यवसाय आवश्यकता हो र केवल साना व्यवसायहरूको दस्तक दिनेछ, उनीहरूको सान्दर्भिकतालाई वास्ता नगरी, खोज इन्जिन परिणाम पृष्ठको बाहिर। म विश्वास गर्दिन कि यो निष्पक्ष छ - र यो एकाधिकारको काम हो। एकाधिकारवादीहरूले निर्णयहरू लिन सक्दछन् जुन प्रतिस्पर्धाको कमीको कारणले परिणामलाई लाभमा प्रभाव पार्छ।
गुगल यसमा होशियार हुन सक्छ ... बिंग हरेक दिन धेरै राम्रो देखिन्छ (र म यसमा चल्दैछु सफारी!)।
टैग: गुगल लोभGoogle +लोभपृष्ठ गतिगति
आफ्ना प्रतिज्ञाहरू राख्नुहोस्
मसँग कुनै प्रतिस्पर्धा छैन
नोभेम्बर २०, २००। 14::2009 अपराह्न
म मेरो मुख्य वर्डप्रेस वेबसाइट को लागी MediaTemple मा सर्दैछु, अधिकतर प्लगइनहरु असक्षम गर्दै, विषयवस्तुहरुमा आवश्यक कार्यक्षमता हार्डकोडिंग, सकेसम्म जाभास्क्रिप्टबाट छुटकारा पाउन, र जतिसक्दो स्थिर पृष्ठहरू WordPress WordPress डाटाबेसबाट बाहिर सर्ने।
यसले मेरो लागतहरू धेरै तरिकामा बढाउँदछ:
१. मेरो होस्टिंग लागत त्रिपक्षीय।
२. स्थिर पृष्ठहरू ह्यान्डल गर्नका लागि मेरो सिर्जना र मर्मत लागत बढाउँदछ
Incre. कार्यक्षमता थप्नको लागत (विशाल रूपमा) बढाउँदछ।
सर्पिल। रिच अझ धनी हुन्छ।
र डेवलाई नभुल्नुहोस् ... तपाईंले त्यसो गरेपछि, तपाईं बकवास सामग्री लेख्न सक्नुहुन्छ! अब तपाईले वास्तवमै अझ राम्रोसँग लेख्ने काम गर्नुपर्दैन… केवल छिटोको चिन्ता!
हो हो ... र आईई, फायरफक्स वा सफारी को बारे मा चिन्ता नगर्नुहोस्… यसलाई केवल गुगल क्रोममा छिटो बनाउनुहोस्, हैन?
नोभेम्बर,, २०१ at 15::2009 बिहान
राम्रो लिखित टुक्रा डग। यहाँ स्पष्ट प्रमाण छ कि Google केवल 'कुनै खराब नगर्नुहोस्' कसमको बारेमा अधिक र अधिक बिरूद्ध दफन गर्न थाल्छ। यो उनीहरूको फारमको अग्रणी मार्ग हो र म मद्दत गर्न सक्दिन तर याहूको समानताहरूको बारेमा सोच्न। २००१--2001 मा तिनीहरूको ब्रान्ड पहिलो पटक धुमिउन थाल्दा। अब तिनीहरू कहाँ छन् हेर्नुहोस्।
नोभेम्बर २०, २००। 15::2009 अपराह्न
त्यो चाखलाग्दो छ। गुगलले शुरू गरेर कुन साईटहरूलाई सबैभन्दा बढी लिंक गरिएको थियो भनेर बताउन शुरू गर्‍यो। यो जनताको आवाजलाई दोहो .्याउनबाट टाढा भइरहेको छ र बरु यसको आफ्नै नियमहरू थोपेको छ। उनीहरूले निर्णय लिइरहेका छन् आफ्ना ग्राहकहरूको लागि के सही छ, ग्राहकहरूलाई आफैंले निर्णय गर्न दिनुहुन्न!
नोभेम्बर २०, २००। 16::2009 अपराह्न
म एक अवरोधकारी हुनलाई घृणा गर्दछु, तर जब गुगलले सामान्यतया परिवर्तन गर्दछ, SE विश्व पागल हुन्छ - "pranoid" त्यो CNN तरिकामा जहाँ उनीहरूले पहाड बनाउँदछ दर्शकहरू र विज्ञापन राजस्व माथि। गुगलले दुर्लभ रूपमा सटीक परिवर्तनहरू गर्दछ जुन ल्यान्डस्केपलाई ओभरल गर्दछ। सामान्यतया, गुगल का परिवर्तनहरू एक व्यापक ब्रशको साथ बनाइएको छ। र यदि यो अपलोड परिवर्तन एक कारक भयो भने, यो सायद यो सदस्यता लिन सक्ने दायरा भित्र हुनेछ। मलाई लाग्छ माउन्टेन भ्यूका केटाहरू पनि उनीहरूको बजार सेयरबारे सचेत छन् र जान्दछन् कि यदि उनीहरूले जनतालाई अपील गरेनन् भने उनीहरूले आफ्नो हिस्सा गुमाउन सक्छन्।
यसका अलावा, कसैले पनि वास्तवमा गोड्याड्डी प्रयोग गर्नु हुँदैन सामग्री जे भएता पनि होस्टिंग गर्न (अनुभवबाट बोल्दै)। म विश्वस्त छु कि उनीहरूको अपलोड समयले मेरो प्रयोगकर्ता अनुभवलाई चोट पुर्‍याउँछ जब सम्म म उनीहरूको साइटहरूमा हुँदिन (जुन आशावादी हुन्छ सबै समय)।
नोभेम्बर,, २०१ at 17::2009 बिहान
डग = पागल। 😐
हो यसका साँचो गुगलले वेब लिन खोज्दैछ - र उनीहरू अहिले त केहि समय भइरहेको छ। तर सबै चीज जस्तै, अधिक प्रयोग भएको कुरा अधिक मानिसहरू यसको बारेमा गुनासो हुन्छन्।
केवल समय बताउँछ ... 🙂
मलाई लाग्छ कि हामी दोहोरो तरवारको साथ व्यवहार गरिरहेका छौं। एक तर्फ, तपाइँसँग एउटा निगम छ जुन ... राम्रो ... निगमको रूपमा व्यवहार गर्दैछ। लागतहरू सँधै एक विचारको रूपमा हुने छ र तिनीहरूले उनीहरूको फिर्ती अधिकतम बनाउन के गर्ने छन्, र यस मामिलामा ढिलो साइटहरू खराब हुनेछन्। अर्को तर्फ, गुगलले आफ्नो सेवा अधिकतम बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, जुन प्रयोगकर्ताको लागि यसलाई अधिक सक्षम बनाउँदै वेब अनुभव बृद्धि गर्दछ। वेब अधिक जटिल हुँदै जाँदा, गुगलले यसको उत्पादनको सुरक्षा गर्नुपर्दछ र परिवर्तनहरू अनुकूल बनाउनुपर्नेछ जसले यसको सेवाको गुणवत्तालाई असर गर्दछ। इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको समयको कदर गर्दछन्, र विशेष रूपमा कुशल नभएका साइटहरूलाई फिल्टरि गरेर Google सेवामा मूल्य थप गर्दछ। म यो विशेष गरी खराब कार्यको रूपमा देख्दिन। वेबसाइट छिटो बनाउनु महँगो प्रक्रिया होइन, किनभने त्यहाँ धेरै पैसा खर्च गरे बिना गति बढाउने धेरै तरिकाहरू छन्।
मलाई लाग्छ यो सब भन्दा कम दुष्ट चीजहरू मध्ये एक हो जुन मैले गुगललाई लामो समयदेखि गरेको देखेको छु। तिनीहरू वेबमा राम्रोसँग प्रभाव पार्ने स्थितिमा छन्। यदि पृष्ठ गतिको वजनले रैंकिंगलाई ठिक रूपमा प्रभाव पार्दैन, परिणाम उद्योगमा साइट गतिको बढि जागरूकता हुनेछ। छिटो वेबले हामी सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
वेबसाइट डिजाइन जुन द्रुत रूपमा लोड हुन्छ जुन पक्कै गाह्रो छैन। वेबको हालको स्थिति दिईएको छ, औसत साइट (प्रायः ठूला केटाहरू पनि) एकदम नराम्रो गलत कामहरू गर्दैछन् कि त्यहाँ एक * टन * कम फांसीको फल रहेको छ। वाईस्लो र गुगल पेजस्पेड प्लगइनहरू फायरफक्समा स्थापना गर्नुहोस्, र त्यसपछि उनीहरूले तपाईंलाई दिएका केही सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्। तिनीहरू मध्ये केही लाई पछ्याए पनि तपाईं लगभग कुनै साईटमा केही घण्टामा पर्याप्त सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
फेरि ... तपाइँ बिन्दु हराइरहेको छ। Companies 99% कम्पनीहरूसँग गतिको लागि उनीहरूको साइटहरूलाई अनुकूलित गर्न संसाधनहरू छैन - तिनीहरू केवल व्यवसायमा रहन कोशिस गर्दैछन्। म असहमत छैन कि गति महत्त्वपूर्ण छ ... मैले मेरो आफ्नै साइटको साथ प्रयास गरें कि अमेजनसँग एकीकृत गर्न मेरो पृष्ठ लोड समय २ सेकेन्ड अन्तर्गत प्राप्त गर्न सकें। मँ तर्क गर्छु कि यो सबैका लागि एक विकल्प हो। होइन!
डग, साइटमा URL के हो जुन तपाईंले अमेजनसँग अप्टिमाइज गर्नुभयो पृष्ठ २ सेकेन्ड अन्तर्गत पृष्ठ लोड समय प्राप्त गर्न?
मैले तपाईंले भनेको कुरा सही तरीकाले बुझ्दछु, तर म तपाईंसँग असहमत छु। वाईस्लोले सिफारिस गरेको धेरै अप्टिमाइजेसनहरू कोहीले गर्न सक्छन् जुन आधारभूत HTML लेख्नको लागि टेक्निकल दक्षता हो। अनलाइन बेच्ने कम्पनीसँग कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्दछ जसले HTML सम्पादन गर्न सक्दछ, अन्यथा तिनीहरू SERPs मा उच्च स्तर नबनाउनु भन्दा धेरै ठूलो समस्याहरू भएका छन् 🙂
प्रक्रियामा हिंड्नको लागि वाईस्लोसँग धेरै कागजातहरू छन्, र त्यहाँ "उच्च प्रदर्शन वेबसाइटहरू" जस्तो पुस्तकहरू पनि छन् जुन राम्ररी लेखिएको छ र छिटो पढिएको छ जुन तपाईंलाई प्रक्रिया बुझ्नको लागि पर्याप्त भन्दा बढी दिन्छ। म एक बर्ष वा त्यो भन्दा पहिले त्यो पुस्तक को माध्यम मा पढेको खर्च, र म अत्यधिक सिफारिस गर्दछ जो कुनै एक वेबसाइट छुन्छ।
म अनुमान गर्छु कि मैले भनेको कुरा के हो भने, पूर्ण प्रक्रियालाई नबुझीकन वेबसाइटका मालिकहरूमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भनेर निर्णय गर्न यत्तिको छिटो नहुनुहोस्।
नोभेम्बर २०, २००। 17::2009 अपराह्न
म मेरो सबै सारियो छविहरू र ती फाइलहरू अमेजन S3 मा। तिनीहरूको शक्ति र बहु ​​सबडोमेनबाट लोडि The्गको संयोजनले मेरो लोड समयलाई १० सेकेन्ड + लाई २ सेकेन्ड अन्तर्गत घटायो! पुन: "एक कम्पनी अनलाइन बेच्दै ..." - सबैले अब दान अनलाइन बेच्छ। सबैजनासँग एक वेबसाइट छ ... र अधिकतरसँग समय छैन न ती संसाधनहरू हुन् न ती परिवर्तनहरू गर्न।
म निश्चित छु कि मैले यो नराम्रो चीजको रूपमा देखेको छु। खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्ताको रूपमा म कुनै लिंक चाहान्छु जुन मैले क्लिक गरेको छु (खोज इन्जिनबाट वा कहिँ पनि) चाँडै लोड गर्न। यदि दुई पृष्ठहरू पनि खोज रैंकिंग एल्गोरिथ्मको अन्य सबै पक्षहरूमा थिए भने, यसले मलाई बुझ्दछ कि जुन लोड छिटो लोड हुन्छ त्यो उच्च हुनेछ।
मैले सबै कट्स साक्षात्कार समातिन। के उसले वास्तवमै भन्दछ कि पृष्ठ लोड समय खोजीको क्रममा अझ सशक्त कारक हुनेछ प्रासंगिकता, अधिकार, वा वर्तमानमा हामीले प्रयोग गरिरहेको अन्य कुनै पनि कारकहरू?
यो एक ज्ञात कारक हो जुन द्रुत पृष्ठ लोड समयसँग राम्रो रूपान्तरण दरमा बराबर हुन्छ।
एक वेब साइट को मालिक को रूप मा, तपाइँ चाहानुहुन्छ कि ... गुगलको परिप्रेक्ष्यमा, यो एक एल्गोरिथ्म लेग अप छ, किनकि द्रुत लोडिंग पृष्ठहरूले राम्रो अनुभव प्रदान गर्दछ।
डग, तपाईले सास भन्दा पहिले काम गरिसक्नु भएको छ… यदि केहि ढिलो छ भने, यसलाई प्राय जसो निर्भर कारकहरूमा होइन अनुप्रयोगमा दोष लगाइन्छ। तपाईको अनुभवलाई कत्ति चिन्ताजनक हुन्छ जब तपाईले खोजी पछि सामग्री लोड गर्न १० सेकेन्ड कुर्नु पर्छ ... मलाई लाग्छ कि पृष्ठ र्याकको लागि यो इक्वेसनमा थपिएको हो र सबैले भन्छ जस्तो "खराब" छैन। गुगलको पृष्ठ टेक्नोलोजी र ब्यान्डविथले भरिएको छ - तर यो दाang छिटो छ र तिनीहरू मान्छेहरूले त्यस्तै पृष्ठहरू र अनुप्रयोगहरू निर्माण गरेको चाहन्छ ...
एक कारक, डेल को रूपमा गतिमा कुनै असहमति। म केवल असहमत छु कि एक खोज इञ्जिनले गतिको साथ आफैमा चिन्ता लिनुपर्दछ। र सबै गुगलका पृष्ठहरू र अनुप्रयोगहरू छिटो छैन। मैले गुगल म्याप एपीआईको केएमएल पार्सरको धेरैँलाई लेख्नु पर्‍यो वास्तवमा यसलाई दुई दर्जन रेकर्ड भन्दा पर काम गर्नका लागि। के याहू! नक्शाको छिटो लोड समय छ? मलाई लाग्दैन!
म क्रिस्टोफसँग सहमत छु। वास्तवमा, Google लाई संसारभरि लाखौं मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्, त्यसैले हो यो उत्तम छैन, तर यसले अहिलेसम्म ठूला चीजहरू हासिल गरिसकेको छ। गुगल पैसा चाहिन्छ? नरक आज को गर्छन; केवल किनभने तिनीहरू विश्‍वको सब भन्दा ठूलो कम्पनी हो मतलब उनीहरूले गर्न सक्थे, मलाई थाहा छैन, दयालु बन्नुहोस् र लोभी हुनुहुन्न? २१ औं शताब्दी!
डिसे 1, 2009 मा 1: 21 AM
तर कसरी फैन्सी साना व्यवसायको वेबपृष्ठहरू हुन्छन्? धेरै जसो साना व्यवसायसँग साधारण वेबसाइटहरू हुन्छन्, जुन लोड हुन धेरै समय लिनुहुँदैन। अर्कोतर्फ, माइक्रोसफ्ट जस्तो मोनोलिथ्ससँग सामग्रीको ढेरको साथ विशाल वेबसाइटहरू छन्, जसले गर्दा तपाईंको औसत साना व्यापार वेबसाइट भन्दा लोड गर्न धेरै समय लिन्छ। त्यसकारण ठूलो पृष्ठ व्यापारमा नोक्सान हुन्छ जब यो पृष्ठ लोड समय घटाउने आउँदछ।
मलाई लाग्दैन कि Google लाई पृष्ठ समयलाई स्तर निर्धारण कारकको रूपमा प्रयोग गर्ने एक विशाल कारण छ, तर मलाई पक्कै पनि यो खराब लाग्दैन। र यदि यो हो भने, यसले मात्र ठूला व्यवसायहरूलाई प्रभाव पार्छ।